समर्थकको आशामा युभेन्ट्स, रोनाल्डोले मद्रिडलाई दिए यस्तो चेतावनी !! - Experience Best News from Nepal
समर्थकको आशामा युभेन्ट्स, रोनाल्डोले मद्रिडलाई दिए यस्तो चेतावनी !!
जारी च्याम्पियन लिगका निम्ति युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो टिम एथ्लेटिकोविरुद्ध खेल्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन् । आइतबार युभेन्टसको अफिसियल टिभी ‘युभेन्टस टिभी’सँग कुरा गर्दै रोनाल्डोले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगमा एथ्लेटिको निकै आक्रामक टिम भए पनि नयाँ पदर्शनको लागि तयार रहेको बताएका छन् । उनले आफूले टिमलाई कमब्याक जित दिलाउन व्यक्तिगत रूपमा असम्भवलाई सम्भव बनाएर देखाउने पनि बताएका छन् ।
उनीहरू बलिया छन् तर हामी जोखिम चाहदैनौं, आक्रामक खेल खेल्ने छौ र हामी त्यसका निम्ति तयार छौं । हामी यो खेल जितेर अर्को चरण जान सबथोक गर्न तयार छौं,’ रोनाल्डोले भने ।
रोनाल्डोले घरेलु मैदानमा उत्रिँदा आफूहरूलाई घरेलु दर्शकको साथ मिल्ने बिताए । ‘हामी यो खेल आफ्नो घरमा खेल्दैछौं । हामीलाई विश्वास छ, हाम्रा फ्यानहरूले त्यो रातलाई विशेष बनाउनेछन् । उनीहरूले हाम्रो हौसला बढाउनेछन्,’ रोनाल्डोले थपे ।
रोनाल्डो हाल च्याम्पियन लिगका निम्ति आराम गरिरहेका छन्।
रोनाल्डोले आफूहरू ज्यादै सकारात्मक भएर मैदान उत्रिने बताए । ‘फुटबलमा असम्भव केही छैन । हामी सकारात्मक सोचका साथ एथ्लेटिकोविरुद्ध उत्रिँदैछौं । अहिले हामीले जितबाहेक अरू कुरा सोचेका छैनौं,’ रोनाल्डोले भने, ‘हामी त्यो रातलाई शानदार बनाउन चाहन्छौं ।’
उक्त चुनौतीबाट माथि उठ्ने रोनाल्डोले दावी गरेका छन् ।
रोनाल्डो राष्ट्रिय टिममा फर्किदै !! नेशन्स लिग सेमिफाइनल खेल्ने
बार्सिलोना र लियोनको इतिहास यस्तो, अन्तिम १६मा लियोन र बार्सिलोनाको भिडन्त कहिले ?
युनाइटेडको चमत्कारी जित, फ्रेन्च लिग हेबी वेटको कप यात्रा अन्त्य
मेस्सीको शिर्ष ५ मा परेनन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो !!! को को परे मेस्सीको उत्कृस्ट ५ भित्र ??